Dagaal ka dhacay magaalada Muqdisho - BBC News Somali
18 Luulyo 2010
Image caption Xoogaga ka soo horjeeda dowladda
Ugu yaraan afar qof oo rayid ah, ayaa ku dhintay, ilaa 24 qofna way ku dhaawacmeen kadib markii magaalada Muqdisho uu maanta galinkii dambe ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Uganda iyo xoogaga ka soo horjeeda dowladda ee ay ugu horeyso kooxda al-Shabaab.
Sidaas, waxaa BBC u sheegay Cali Muuse oo ka tirsan shaqaalaha gaadiid gurmadka degdega ah ee ka shaqeeya daadguraynta dadka rayidka ay ee wax ku noqda dagaalada.
Dagaalka, ayaa bilowday kadib markii xoogaga mucaaradku ay weerareen fariisimmo ay leeyihiin ciidamada dowladda iyo hotelkii hore ee Jubba oo ciidamada AMISOM ay fariisin dhowaan ka samaysteen.
Goobahaas, oo ku yaalla degmada Boondheere ee gobolka Banaadir.
Labada dhinac mid walba gooni ayuu u sheeganayaa guul. Balse, waxaa aad u adag in la ogaado khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan, iyadoo uu ka dhacayo goobo ay horay u baneeyeen dadka rayidka ah.
Hase yeeshee, waxaa jiray hoobiyayaal iyo madaafiic culus oo ka dhacaysa qoriga BM-ka ay isku ridayaan labada dhinac, kuwaas oo qaarkood gaaray meelo ay ka mid yihiin Suuuq-Bacaad iyo degmada Kaaraan meelo ka mid ah.
Ilaa goor dhowayd, waxaa la maqlayay madaafiic lagu garaacayo qaybo ka mid ah magaalada.
Degmada Xamar-wayne hoobiye ku soo dhacay, ayaa waxaa ku dhaawacmay 11 caruur dugsi ah oo qur'aan ku aqrisanysay malcaamad. Agaasimaha isbitaalka Madiina, Dr Maxamed Yuusuf, ayaa BBC u sheegay in 11-ka caruurta ah la geeyay isbitaalkooda, dhamaantooda ay fudud yihiin dhaawacyada soo gaaray.